နာနတ်သီး Guava Tree: Tangy အပူပိုင်းဆိုင်ရာရယူထားသော - သစ်သီးများ
နာနတ်သီး Guava Tree: Tangy အပူပိုင်းဆိုင်ရာရယူထားသော
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကအဖိုးရဲ့နာနတ်သီးဂွာဗာသစ်ပင်ကိုသဘောကျခဲ့တယ်။ သူကအဲဒါကို feijoa လို့ခေါ်ပြီးရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမျှကုန်ပစ္စည်းတွေအများကြီးနဲ့ပြည့်နေတဲ့အိတ်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့တယ်။ ငါထို့နောက်နေထိုင်ခဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်း၌, ကစတိုးဆိုင်များအတွက်ဘုံမဟုတ်ခဲ့!
ယခုငါအသက်ကြီးသောအခါ, ငါတစ်ခါတစ်ရံ feijoa sellowiana ဟုခေါ်တွင် acca sellowiana ၏ကြီးမားသောပန်ကာမိပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိသီးနှံအသီးတစ်ခုအဖြစ်စျေးကွက်သို့မပို့ဆောင်မီပျက်စီးယိုယွင်းနေသောကြောင့်၎င်းမှာအဆန်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဥယျာဉ်မှူးတစ် ဦး အဖို့၎င်းသည်သစ်ပင်တစ်ပင်သို့မဟုတ်ချုံပုတ်ကဲ့သို့စိုက်ပျိုးနိုင်သည့်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသောအပင်ဖြစ်သည်။
ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့အပူပိုင်းဒေသ၏အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်ဆွေးနွေးကြပါစို့။ အလင်းလိုအပ်ချက်များမှအသီးထုတ်လုပ်မှုသို့သင်အိမ်တွင်ကြီးထွားရန်သင်လိုအပ်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးအုပ်ပေးပါမည်။ ဤသည်သတ္တုတွင်း၏အကြိုက်ဆုံးစက်ရုံဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လည်းသင်၏တ ဦး ဖြစ်လိမ့်မယ်!
Feijoa စိုက်ပျိုးသူများအတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များ -
Serenade ဥယျာဉ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး fungicide
နာနတ်သီး guava ပင်၏အသီးသည်ဘဲဥပုံသို့မဟုတ်သစ်တော်သီးပုံသဏ္andာန်ရှိပြီးအစိမ်းအနက်ရောင်ဖြစ်သည်။
ဘုံအမည် (များ) နာနတ်သီး guava, mangosteen, feijoa
သိပ္ပံနည်းကျအမည် Acca sellowiana သို့မဟုတ် feijoa sellowiana
အပင်ပေါက်ရန်အတွက်အချိန် အပင်ပေါက်ရန်အတွက်အမျိုးအနွယ်ကို3ပတ်
ရိတ်သိမ်းရန်နေ့ရက်များ အများအားဖြင့်ပန်းပွင့်၏6လအတွင်း
ရေ: အကောင်းဆုံးအသီးအနှံများအတွက်တစ်ပတ်လျှင် ၁ ။
မြေဆီလွှာ Loamy, အော်ဂဲနစ်ကြွယ်ဝသော, ကောင်းစွာဖျန်
ဓာတ်မြေသြဇာ 8-8-8 granular နှေးကွေးဖြန့်ချိဓာတ်မြေသြဇာ
ပိုးမွှား အင်းဆက်ပိုးမွှားများ, အသီးယင်ကောင်
ရောဂါများ ခဲ cercospora အရွက်အစက်အပြောက်သို့မဟုတ် downy အနာ
ရင့်ကျက်တဲ့နာနတ်သီး guava ပင်။ သစ်သီးမှည့်သောအခါသစ်သီးမှကျသည်။
နာနတ်သီး guava feijoa sellowiana သို့မဟုတ် acca sellowiana လား ကောင်းပြီ၊ တကယ်တော့ဒါနှစ်ခုလုံးပဲ။ ၎င်း၏မျိုးရိုးအမည်ကိုစပိန်ရုက္ခဗေဒပညာရှင်ဒွန်ဒါဆေးလ်ဗားဖီဂျွာကိုဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ မျိုးစိတ်အမည်ကပထမ ဦး ဆုံးနမူနာကိုကောက်ယူခဲ့တဲ့ဂျာမန် Friedrich Sellow ။
ဘရာဇီးနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးပါရာဂွေး၊ ကိုလံဘီယာ၊ အာဂျင်တီးနားနှင့်ဥရုဂွေးတို့တွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ မိသားစု Myrtaceae ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကို guavasteen, feijoa နှင့် fig guava ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းကိုဘရာဇီးလ်ဂူဗာဗာသို့မဟုတ်၎င်း၏ထူးဆန်းဆုံးအမည်ဖြစ်သောနယူးဇီလန်ငှက်ပျောသီးအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
ဒီသစ်ပင်သည်ပေ ၂၀ အမြင့်အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်း၏အများအပြား - ပင်စည်အလေ့အထကြောင့်ခြံသို့မဟုတ်ရှုခင်း windbreak ဖွဲ့စည်းရန်အစုလိုက်အပြုံလိုက် - စိုက်၏။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမြဲစိမ်းသည်ဇုန် ၈-၁၀ တွင်အကောင်းဆုံးပေါက်ရောက်သည်။
၎င်း၏အရွက်များသည်ငွေရောင် - မီးခိုးရောင်အောက်ခြေများနှင့်အစိမ်းရောင်မှောင်မိုက်သည်။ ဤသည်မျိုးစိတ်စက်ရုံအခြေစိုက်စခန်းထံမှစွယ်အကိုင်းအခက်ဖွံ့ဖြိုးလိမ့်မည်။ ချုံ့ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ပို၍ တူသောကြီးထွားလာသောပုံစံကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ၎င်းကိုကိုယ်ပိုင်ကြီးထွားရန်ခွင့်ပြုခြင်းသည်ရှည်လျား။ ပါးလွှာသောအကိုင်းအခက်များကိုကျယ်ပြန့်သောအမိုးများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
အကိုင်းအခက်များသည်ရံဖန်ရံခါအခွံခွာနေသောမီးခိုးရောင်အခေါက်နှင့်အညိုရောင်ဖြစ်သည်။ အရွက်များသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွဲများဖြင့်ဖွဲ့စည်းပြီးဌာနခွဲတွင်မြင့်မားစွာနေရာချသည်။ ဒါဟာစက်ရုံ၏အောက်ပိုင်းသောအဘို့ကိုအတွက်ပန်းပွင့်မထားဘူး။
နွေ ဦး ရာသီတွင်လှပသောအနီရောင်ပန်းများသည်တစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ်အုပ်စုလိုက်ပေါ်လာသည်။ ဤပန်းပွင့်တစ်မျိုးစီ၌ဇာတိပကတိလေးကောင်နှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းခရမ်းရောင်ဖြောင့်မတ်သော stamens များပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကား Petaling စားသုံးနိုင်သောဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းအသီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်ပါဘူး။
အသီးသည်အစိမ်းနှင့်ဘဲဥပုံသို့မဟုတ်သစ်တော်သီးပုံဖြစ်သည်။ ခုတ်ဖြတ်လိုက်သည့်အခါအတွင်းပိုင်းသည်ပျော့ပျောင်းပြီးအမှုန်အမွှားပါရှိသည်။ ရနံ့သည်ချိုမြိန်ပြီးအနံ့အရသာရှိပြီးနာနတ်သီးနှင့်ဂူဗာဗာသို့မဟုတ်နာနတ်သီးနှင့်စတော်ဘယ်ရီတို့စပ်ကြားတွင်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ မရင့်မီကပင်အမွှေးနံ့သာရှိသည်။
cultivars တစ်ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးရရှိနိုင်ပါသည်။ Coolidge, Pineapple Gem နှင့် Mammoth တို့သည်ကျွန်ုပ်၏ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင်အသုံးအများဆုံးဖြစ်သော်လည်းကမ္ဘာပေါ်တွင်အခြားမျိုးကွဲများစွာရှိသည်။
ပန်းများသည်အသားအရေလှပပြီးအမဲသားရှိသောလေးညှပ်ပွင့်များနှင့်အလယ်ဗဟိုတွင် stamens စုစုပေါင်းရှိသည်။
သင်သည်ဤအပင်များအတွက်စောင့်ရှောက်မှု၏လွယ်ကူသောကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကဥယျာဉ်မှူးများအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အသီးပါပဲ, သူတို့သည်ဥယျာဉ်ကို setting ကိုအတွက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပါပဲ!
နေရောင်အပြည့်အ ၀ သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရိပ်ကိုသည်းခံနိုင်ပေမယ့်သူတို့ကနေရောင်ခြည်တော်တော်များများကိုပိုနှစ်သက်တယ်။ ဇုန် ၁၀ မှ ၁၁ အတွင်းရှိသူများသည်သူတို့မွန်းလွဲပိုင်းအရိပ်တွင်ထားရှိခြင်းကိုစဉ်းစားလိုပေမည်။
feijoa သစ်ပင်ကဲ့သို့အပူပိုင်းဒေသအပင်များသည်ပူသောအပူချိန်ကိုပိုနှစ်သက်သည်။ တည်ဆောက်ပြီးသည်နှင့်အပင်တစ်ပင်ဟောင်းသည်အပူချိန်ကိုအနိမ့်ဆုံးတွင် ၁၅º ဖာရင်ဟိုက်အထိသည်းခံနိုင်သည်။ ဆောင်းရာသီသည်အေးမြပြီး (၃၀-၄၀ º) နှင့်နွေရာသီသည် ၈၀ မှ ၉၀ ကြားအကြားရှိသောဒေသများဖြစ်သည်။
စိုက်ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့အပင်များမိုးခေါင်မှုဒဏ်ခံဖြစ်ကြပေမယ့်အသီးကိုသီးရေလိုအပ်သည်။ အကောင်းဆုံးသစ်သီးများအတွက်သင်၏အပင်များကိုတသမတ်တည်းရေလောင်းပါ။ သူတို့၏ဇာတိပတ်ဝန်းကျင်တွင်တစ်နှစ်လျှင် ၃၀ မှ ၄၀ လက်မရွာသွန်းနိုင်သဖြင့်အလားတူရေရရှိရန်ရည်ရွယ်သည်။ တစ်ပတ်ကိုရေ ၁ လက်မလောက်ရှိတယ်။ အထူးသဖြင့်သီးပွင့်လျှင်ပူသောရာသီဥတုတွင်အစိုဓာတ်ကိုပေးပါ။
ရင့်ကျက်သော feijoa ရွက်များကိုအနီးကပ်ကြည့်ရန်။ ရင်းမြစ်: Lorin Nielsen
၎င်းသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်မြေဆီလွှာတွင်ကြီးထွားလာနိုင်သော်လည်း Aca sellowiana သည်အော်ဂဲနစ်ကြွယ်ဝသောမြေဆီလွှာကိုပိုနှစ်သက်သည်။ မစိုက်ပျိုးမီဆွေးထည့်ပါ။ တည်နေရာသည်ပိုလျှံသောအစိုဓာတ်ကိုစစ်ထုတ်ရမည်။ အတိမ်အနက်အမြစ်တွယ်နေသောဤအပင်များသည်ခြေရင်းပတ်ပတ်လည်ရှိရေအိုင်ကိုသည်းမခံပါ။
ကိုရှောင်ရှား Hard Packed ရွှံ့မြေဆီလွှာများ ဖြစ်နိုင်လျှင်အမြစ်သူတို့ကိုခက်ခဲအချိန်ရှိသည်အဖြစ်။ မြက်ခင်းပြင်နှင့်မြေသြဇာကောင်းသောဥယျာဉ်မြေသည်အထူးသဖြင့်ဆွေးနှင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်။
Sandier မြေဆီလွှာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုအတွက်ရေအလုံအလောက်မရရှိသည်။ ဤအရာများဖြင့်သင် ပိုမို၍ ရေသွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ယိုဆည်မြောင်း soaker ရေပိုက် ရေကိုရိုးရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ထူထပ်သောကောက်ရိုး mulch အကြံပြုသည်။
monthsပြီလမှအောက်တိုဘာလအထိမျှတသော ၈-၈-၈-8 ဓာတ်မြေသြဇာဖြင့်နှစ်လတစ်ကြိမ်မြေသြဇာပြုပါ။ အနည်းဆုံး 5″ ဝေးပင်စည်ကနေသစ်ပင်သို့မဟုတ်ချုံရဲ့မြတ်သောအပင်အောက်မှာအညီအမျှဖြန့်။
ရာသီဥတုအေးလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ကြီးထွားမှုအသစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ဓာတ်မြေသြဇာကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
ချုံသို့မဟုတ်ခြံအဖြစ်ကြီးထွားသောအခါ, အကိုင်းအခက်မြေပြင်သို့နိမ့်ထိုင်နိုင်ပါတယ်။ ရင်းမြစ်: Lorin Nielsen
အသစ်သောငယ်ရွယ်သောအကြံဥာဏ်များမှဌာနခွဲခုတ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန် rooting hormone ကိုသုံးပါ။ သင့်ရဲ့ရှနွေးဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ, သူတို့နေရောင်အပြည့်အဝရှိရာနေရာတစ်နေရာမှာသူတို့ကိုထားပါ။ စိုစွတ်နေစဉ်အတွင်းမြေဆီလွှာကိုစိုစွတ်အောင်နွေးပါ။
အမျိုးအနွယ်ကိုအပင်ပေါက်ရန်အတွက်အကြမ်းအားဖြင့်သုံးပတ်ကြာသည်။ damping off ဘုံဖြစ်သကဲ့သို့သူတို့ကို, မြုံမြေဆီလွှာ၌စိုက်ပျိုးရပါမည်။ တိကျသောအမျိုးအစားများကိုရရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလားအလာရှိသောမျိုးစေ့ကိုအသုံးပြုပါ။ အိမ်၌ရိတ်သိမ်းထားသောမျိုးစေ့သည်ရှင်သန်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏ပင်ရင်းအပင်၏မိတ္တူပွားခြင်းကိုမဖြစ်စေနိုင်ပါ။
ကွန်တိန်နာဥယျာဉ်သည်နာနတ်သီး guava နှင့်အတူ option တစ်ခုဖြစ်သည်! လူများစွာသည်သူတို့၏သစ်ပင်များကိုကွန်တိန်နာကြီးများတွင်သိုထားရာတွင်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ အမြစ်များသည်ကျယ်ပြန့်စွာနေရန်သေချာစေပါ၊ စည်တစ်ဝက်ကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်။ ရေတိမ်ပိုင်းသည်ရှည်သောနက်ရှိုင်းသောကွန်တိန်နာထက်ပိုကောင်းသည်။
၎င်း၏ကြီးထွားမှုသိသိသာသာနှေးကွေးလျှင်, repot ဖို့အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ နွေ ဦး ရာသီ၌, သင်၏စက်ရုံ၎င်း၏လက်ရှိအိုးထဲကနေဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အမြစ်များကိုဆန်းစစ်ပါ။ သူတို့ဟာအိုးပုံသဏ္circleာန်နဲ့စတင်ဝိုင်းရံနေမယ်ဆိုရင်ပိုကြီးတဲ့အိုးကိုရွေးပါ။ အဟောင်းကိုဖယ်ရှားပြီးပြန်လည်စိုက်ပျိုးချိန်တွင်ကြွယ်ဝသောမြေအသစ်များကိုပေးပါ။ အရင်ကဲ့သို့တူညီသောအတိမ်အနက်ကိုစိုက်ပါ။
သစ်ပင်တစ်ပင်အနေဖြင့်အဝေးမှအထွက်အများစုကိုဖယ်ရှားပြီးအဓိကပင်စည်တစ်ခုကိုအထက်သို့လေ့ကျင့်သည်။ ရင်းမြစ်: Lorin Nielsen
သင်၏စက်ရုံသည်၎င်း၏မြုံနေသောအခြေအနေသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါဆောင်း ဦး ရာသီသို့မဟုတ်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်သုတ်သင်ပါ။ ရည်ရွယ်ချက်မှာသစ်ရွက်သစ်များကိုတက်ကြွစွာမထုတ်လုပ်သည့်အခါသုတ်သင်ရန်ဖြစ်သည်။
၎င်းကိုသစ်ပင်တစ်ပင်ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်လေ့ကျင့်ပါကပင်စည်၏အောက်ခြေမှအကိုင်းများသို့မဟုတ်သစ်ရွက်အားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ပါ။ နိမ့်သောအကိုင်းအခက်များကိုပင်စည်၏အောက်ခြေ ၁/၃ မှဖယ်ရှားနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်ပန်းပွင့်သို့မဟုတ်အသီးမဖြစ်မည်။
အလင်းရောင်ပိုမိုရရှိစေရန်ဒေါင်လိုက်ကြီးထွားမှုအားပါးလွှာစေသည်။ ပိုးကင်းကိုသုံးပါ တံစဉ်များကိုရှောင်ကွင်း သင့်ရဲ့ဖြတ်တောက်မှုစေရန်။ သူတို့အပေါ်မှာပန်းများရှိသောအကိုင်းအခက်များကိုရှောင်ပါ။
နွေ ဦး ရာသီနှင့်နွေရာသီတွင်အတူတကွပွတ်သပ်။ အချင်းချင်းဖြတ်ကူးနေသောအကိုင်းများကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ ပွတ်တိုက်မှုသည်အသီးသို့မဟုတ်အခေါက်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဤအချက်များတွင်အားနည်းသောအကိုင်းများကိုဖယ်ရှားပြီးပိုမိုအားကောင်းသောအရွက်များကိုနေရာတွင်ထားပါ။
ချုံဖုတ်ပုံစံရွေးချယ်ခြင်း? အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏အဓိကတံစဉ်များကိုချိန်ထားပါဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပုံဖော်ပါ။ သင်အပင်များအကြားနေရာများဖြည့်စွက်ကူညီလိမ့်မယ်အဖြစ်, စည်ကနေနိမ့်ကြီးထွားမှုဖယ်ရှားပစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
အတွင်းပိုင်း၌အသီးများသည်အမှုန့်အသားနှင့် gelatinous seed seed အခန်းများရှိသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်Aprilပြီနှင့်ဇွန်လကြားတွင်ပန်းပွင့်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် feijoas များသည်ပန်းများပေါ်လာချိန်မှ ၆ လအတွင်းမှည့်သည်။
ဒီစက်ရုံရဲ့ Self- ရိတ်သိမ်း။ အသီးရင့်မှည့်သောအခါသူကသူ့ဟာသူကျလိမ့်မည်။ သင်၏အပင်များအောက်တွင်အနည်ထိုင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ပျော့ပျောင်းသောကောက်ရိုးတစ်မျိုးကိုအကြံပြုသည်။ သင်၏အပင်အောက်မှပြိုလဲနေသော guavas များကိုနေ့စဉ်စုဆောင်းပါ။
ပူနွေးသောအခြေအနေများတွင်အသီးသည် ၄ ​​င်း၏ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းမတိုင်မီ ၃-၄ ရက်သာကြာနိုင်သည်။ 32 ဒီဂရီမှာအအေးသိုလှောင်မှုက၎င်း၏သက်တမ်းတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။ အအေးသိုလှောင်ခြင်းမှဖယ်ရှားပြီးသည်နှင့်ပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်လျင်မြန်စွာအသုံးပြုပါ။
ပို၍ သဘာဝကျသောချုံဖုတ်ပုံစံဖြင့်လူငယ်တစ် ဦး feijoa ။ ရင်းမြစ်: Lorin Nielsen
အနည်းငယ်သာသင့်ရဲ့နာနတ်သီး guava အတွက်အခက်အခဲများဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ သို့တိုင်၊ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ပြproblemsနာအနည်းငယ်ကိုကျော်ကြည့်ကြပါစို့။
အသီးများများစဉ်အတွင်းအပူလွန်ကဲစွာထွက်ရှိမှုကြောင့်အပင်များကိုကျစေနိုင်သည်။ သင့်တွင်ရုတ်တရက်ရေရှည်အပူဖြစ်သောအပူရှိန်ရှိပါကအရိပ်အထည်အချို့ကိုချထားရန်စဉ်းစားပါ။ နေ့လည်ခင်းအရိပ်သည်အချိန်မတန်မီကျဆင်းနိုင်ခြေကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ အပိုဆောင်းရေလောင်းလည်းကူညီလိမ့်မည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, အနက်ရောင်စကေး အသုံးအများဆုံးပိုးမွှားဖြစ်ပါတယ်။ အခြားစကေးပုံစံများကိုပြည်ပမှာဘုံဖြစ်ကြသည်။
အသီးယင်ကောင် နွေရာသီမှာပြanနာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ပြုတ်ကျသောအခါထွက်ကုန်များကိုကောက်ယူပါ။
ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင် ဆီယူပါ သစ်သီးများကိုမထိခိုက်စေဘဲပိုးမွှားကူးစက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
ဥယျာဉ်ရောဂါများသည်ဤမျိုးစိတ်များတွင်မများပါ။ ရှားပါးသောအခြေအနေမျိုးတွင် cercospora အရွက်အစက်အပြောက် ပေါ်လာနိုင်တယ်
လည်းခေါ် Sooty မှို downy အနာ အလွန်စိုထိုင်းသောဒေသများတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ဤငယ်ရွယ်သော feijoa သည်ရိုးရာသစ်ပင်ပုံစံကိုလေ့ကျင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ရင်းမြစ်: Lorin Nielsen
Q: နာနတ်သီး guava သည်ဝတ်မှုန်ကူးရန်လိုအပ်ပါသလား။
A: မျိုးကွဲအများစုသည်ပျားများသို့မဟုတ်အခြားတ်မှုန်ကူးသောအင်းဆက်ပိုးများဖြင့် ၀ တ်မှုန်ကူးသည်။ သင်စိုက်ပျိုးသောအပင်ပေါ် မူတည်၍ သင်တစ်ပင်ထက်မကလိုအပ်နိုင်သည်။ အမျိုးအစားအများစုမှာအနည်းဆုံးသီးနှံများဖြစ်သော်လည်းအနီးအနားရှိအခြားစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူသီးနှံများပိုမိုရိတ်သိမ်းသည်။
ဖြေ - ရင့်ကျက်သောအပင်အများစုသည် ၁၀-၁၅ ပေအမြင့်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်းပေ ၂၀ အထိအမြင့်ရှိနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော feijoa ခြံများကဲ့သို့ချုံကဲ့သို့သောကြီးထွားမှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့် 3-8 ပေအမြင့်ရှိသည်။